Empira Jermanika Masina - Wikipedia
Ny Empira Jermanika Masina na Empira Romana Masina na Firenena Jermanika na Empira Masina Rômana Jermanika (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation amin'ny teny alemàna, Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ amin'ny teny latina) dia firaisana ara-politika ny tany ny Eoropa Andrefana sy Afovoany tamin'ny Andro Antenantenany, ary entin'ny mpitondra romana jermanika.
Ny Empira Masina Rômana Jermanika dia naorin'i Othon I Lehibe tamin'ny taona 962 sy noravan'i Napoléon I tamin'ny taona 1806 . Indraindray izy dia atao hoe Reich voalohany. Nitondra izany anarana izany io empira io nanomboka amin'ny taonjato faha-15. Vokatry ny ezaka maro hamerenana indray ny Empira Rômana Adrefana (izay nosoloan'ny fanjakana maro mahaleo tena) ny famoronana ny Empira Masina Rômana Jermanika. Na dia niovaova ny anarany sy ny sisintaniny nandritra ny taonjato maro dia nifanandrindrify amin'ny an'ireo Fanjakana alemàna.
Amban'ny dinastia otonianina tamin'ny taonjato faha-10 ny Empira no nanomboka nisy, avy amin'ny Fransia Atsinanana Karolinjianina. Ilay fitenenana hoe Sacrum imperium dia nisy tamin'ny taona 1184, ary niasa foana tamin'ny 1254. Ilay fanampiny Deutscher Nation (Nationis Germanicæ amin'ny teny latina) nipetraka tamin'ny taonjato faha-15. Ny fivelaran'ny faritanin'ny Empira Masina dia niovaova foana tamin'ny taonjato manaraka, tamin'izay no nivelatra indrindra, ilay empira nivelatra amin'ny Eoropa Afovoany sy faritr'i Eoropa Atsimo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira_Jermanika_Masina&oldid=1011319"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 06:40 ity pejy ity.